के मानवले अर्काे शताब्दी देख्न पाउँछ ? मानिसको पनि कतै डायनोसरको जस्तै हविगत त हुने होइन ? - पलपलका खबर
अहिले मानवजाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, महामारी अथवा पृथ्वीमा उल्का पिण्ड खस्नेजस्ता ज्यान जाने घातक खतराहरुको सामना गरिरहेको छ ।
रेडियो प्रसारणकर्ता तथा दार्शनिक डेभिड एडमन्डस्ले यो विषयमा विशेषज्ञहरुसँग कुराकानी गरेर यो शताब्दीको अन्त्यसम्म मानिसको अस्तित्व नै मेटिने त होइन भन्ने विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छन् ।
सन् १९८० को दशकसम्म हामीलाई के लाग्थ्यो भने आकाशबाट खस्ने उल्का पिण्डको कारण पृथ्वीमा कुनै महाविनाश आउँदैन । तर यही दशकमा वैज्ञानिक लुइस र वाल्टर एवारेज (बाबु–छोरा) ले उल्का पिण्डको कारणले नै डायनोसरको अस्तित्व मेटिएको अवधारणा राखेका छन् ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकाे सेन्टर फर एक्सन्टेशियल रिस्कमा काम गर्ने ललिथा सुन्दरम जैविक खतराको अध्ययन गरिरहेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सन् १९१८ मा स्पेनमा फ्लूको महामारीको दौरान एक अनुमानका अनुसार, झण्डै आधा जनसंख्या यसको चपेटामा आएका थिए र यसबाट ६ देखि १० करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।’ जब ठूलो संख्यामा विस्थापन हुन्छ तब महामारी हुने गर्दछ ।
मानव निर्मित विनाशको खतराको पछि कुनै उद्धेश्य हुँदैन । तर विज्ञान र प्रविधिको युगमा विनाशकारी हमलाको सम्भावना बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि (सिन्थेटिक बायोलोजी) कृत्रिम जीवविज्ञानको प्रयोग गरिरहेको ल्याब (प्रयोगशाला) मा प्राणघातक भाइरस बनाइन्छ ।
फ्यूचर अफ लाइफ इन्स्टिच्यूटका शोधकर्ता फिल टोरेसका अनुसार, यदि सबैकुरा नष्ट गर्ने विनाशकारी बटन (स्वीच) हुन्थ्यो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिको कमी छैन, जो त्यो बटन दबाउन चाहन्छ । त्यो बटन दबाउने धार्मिक कट्टरपन्थी हुनसक्छ, जो यो मान्छन् कि उनीहरुलाई भगवानले दुनियाँको नष्ट गर्ने आदेश मिलेको छ ताकि उसलाई बचाउन सकियोस् । जस्तै जापानमा भएको थियो ।
तर यस्ता व्यक्तिहरुको संख्या कति होला ? एक अनुमानका अनुसार, यो समय विश्वमा साइकोप्याथ (मानसिक रोगी) व्यक्तिको संख्या ३० करोड हुनसक्छ । यसमध्ये केही व्यक्ति आम मानिसका लागि खतरा बन्न सक्छन् ।
तर एउटा कुराबाट विशेषज्ञ चिन्तित छन्, डीप फेक भिडियो (नक्कली भिडियो), जसमा कुनै चर्चित व्यक्तिको फुटेजसँग छेडछाड गरिन्छ र भिडियो बनाउनेले जस्तो चाहना गर्‍याे त्यस्तै बनाउन सक्छ । संदिग्ध एजेन्ट यस्तो गरेर दुई देशको बीचमा युद्ध गराउन सक्छन् र जसले परमाणु युद्धको स्थिति सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ ।
यी खतरालाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त ?
हाम्रो सभ्यता कति संकटमा छ त ? यसको उत्तर यो कुरामा निर्भर रहन्छ कि कस्तो खतराको कुरा गरिँदैछ । भविष्य कुनै पत्थरमा लेखिएको कागज त होइन, यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जसलाई हामी गर्नसक्छौँ र अब बेला भइसकेको छ ।
Previous Article हजारौँ भक्तजनको भीड लाग्ने धार्मिक ‘बालपुरी मठधुनी मन्दिर’पर्यटकीयस्थल बन्दै !
Next Article डाक्टरहरू भन्दछन् यी खानेकुराको सेवन गर्नाले ९० प्रतिशत रोग लाग्नेछैन